Izindaba - Izinto zokwenziwa
Iqhwa lokufakelwa alitholakali endwangu yezingubo zasehlobo, ezenziwe ngezinto zamakhemikhali, isondo lezinto zokusetshenziswa. I-Chiffon indwangu engamelana nemibimbi ephelele, futhi umzimba ongaphezulu unobuhle, elengayo lemvelo, umuzwa opholile noqabulayo, ukuthi ungagqoka kanjani ukuthi muhle kanjani.
Kepha indwangu ye-chiffon enqubweni yokukhiqiza nayo ihlukaniswe yaba yikhwalithi ephezulu futhi iphansi, ukukhetha ukuthembela esandleni ongasithinta, ukubona ngamehlo akho, ungakhethi okubi ukuze wonge imali, kufanele uthenge ikhwalithi. Izindwangu ze-chiffon eziphansi uma zigqoka emzimbeni zizozizwa izithukuthuku eziminyene zihlala esikhunjeni, izindwangu ezinhle kakhulu, izindwangu zekhwalithi ephezulu ngeke zibe nenkinga enjalo.
2. Intambo evuselelekayo
I-fiber evuselelwe iphefumulelwe ukuphotha umbandela kasilika, kusetshenziswa okokusebenza kwemvelo njengokuluhlaza, ukwenziwa kwamakhemikhali kusisombululo esihlanganisiwe, bese kuphothulwa ukucubungula ukwenza i-textile fiber. Ngokumunca umswakama omuhle kakhulu nokungena komoya, ngokungangabazeki kuyintambo yamakhemikhali efaneleke kakhulu ehlobo futhi ayinamatheli nhlobo.
3. Intambo yokwenziwa
I-fiber yokwenziwa iyi-fiber yamakhemikhali emsulwa, eyaziwa nangokuthi i-polyester, okuyindwangu ejwayelekile kakhulu ezingutsheni zasehlobo. Abantu abanezinkinga zokungezwani komzimba nesikhumba bangase babe nomuzwa wokuthi ukugqoka le nto kuzobangela ukungaphatheki kahle kwesikhumba. Eqinisweni, imicu eminingi ye-polyester yamanje iyasebenza futhi ithokomele kakhulu kunokotini. Ezinye izingubo ze-Uniqlo zibuye zisebenzise imicu ye-polyester, ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka ngokungezwani komzimba. \_
Lapho uthenga izingubo ehlobo, ngaphandle kokubheka isitayela, kubalulekile ukwazi ukuthi ungayikhetha kanjani impahla, enhle futhi enethezekile yokugqoka. Ngemuva kokufunda le ndatshana, ngikholwa ukuthi kufanele ube nokujula kwenhliziyo lapho ukhetha izingubo, ngeke ukhethe okungalungile.